အနုပညာတက်ကသိုလျ(ရနျကုနျ)က ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ကို ကြောငျးသားတှကေ ဆန်ဒပွ – Voice of Myanmar
အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ(ရနျကုနျ)က ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအာဏာပိုငျအဖှဲ့ဟာ ကြောငျးသားထုအပျေါ အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျတယျလို့ဆိုကာ ဒီကနမေ့နကျပိုငျးက အဲ့ဒီကြောငျးမှာဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂ(ဗကသမြားအဖှဲ့ခြုပျ)က ကြောငျးအတှငျး ကွှေးကွျောသံ ၃ ခကျြနဲ့လှညျ့လညျဆန်ဒပွခွဲှ့ကပါတယျ။ .
ကြောငျးသားထု အခှငျ့အရေးကာကှယျရေး ဒို့အရေး၊ ကြောငျးသားထုကိုဖိနှိပျထားသော ကြောငျးစညျးကမျးခကျြမြား အလိုမရှိ အပါအဝငျ အဆောငျနထေိုငျခှငျ့ရရှိရေး ဒို့အရေး ဆိုတဲ့ ကွှေးကွျောသံတှနေဲ့ ကြောငျးဝငျးအတှငျးလှညျ့လညျဆန်ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
နယျကနကြေောငျးလာအပျတဲ့ကြောငျးသားအားလုံးကို အဆောငျနထေိုငျခှငျ့ပေးပမေယျ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့အနုပညာတက်ကသိုလျ(ရနျကုနျ)ကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂ(ဗကသမြားအဖှဲ့ခြုပျ)အဖှဲ့ဝငျတဈဦးကိုတော့ အဆောငျနထေိုငျခှငျ့မပေးတဲ့အတှကျ အခုလိုဆန်ဒပွတာဖွဈပွီး ရာဇသံပေးတာလညျးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
” နယျကလာပွီး ကြောငျးအပျတဲ့ ကြောငျးသားတှကေို အဆောငျနထေိုငျခှငျ့လကျမှတျတှေ ထုတျပေးပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကိုတော့ ဗကသအဖှဲ့ခြုပျအဖှဲ့ဝငျဖွဈလို့ အဆောငျမပေးဘူး ပွောပါတယျ။ ဒါဟာဖိနှိပျတာပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့ဘကျက အကွိမျကွိမျညှိုငျးခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး ။ တခွားနယျကလာသူ အကုနျလုံးကို နစေရာအဆောငျပေးပါတယျ ။ဒါကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာ ရာဇသံပေးကွှေးကွျောခဲ့တာပါ။ ၅ ရကျအတှငျးကိုမှ မဖွရှေငျးပေးဘူးဆိုရငျ ဒီထကျပွငျးတဲ့ တိုကျပှဲကွီးတှေ ဆကျလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။”လို့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ(ရနျကုနျ) ကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂ(ဗကသမြားအဖှဲ့ခြုပျ အမှုဆောငျအဖှဲ့ပွညျလညျဖှဲ့စညျးရေး) ဦးဆောငျသူ ကိုအောငျပိုငျဦးကပွောပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနကွေှ့ေးကွျောတဲ့ရကျကနေ ၅ ရကျအတှငျးမှာ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအာဏာပိုငျအဖှဲ့အနနေဲ့ ကြောငျးသားထုအခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျ‌နတောကို ဖွရှေငျးပေးဖို့ကိုပါ တောငျးဆိုထားတာဖွဈပွီး တောငျးဆိုထားတဲ့ (၅)ရကျအတှငျး ကြောငျးသားထုအခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရတာကို မဖွရှေငျးပေးပါက ကြောငျးဝနျးအတှငျး ပွငျးထနျသောပုံစံတှနေဲ့ ဆကျလကျလှုပျရှားသှားမယျလို့သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ နောကျဆကျတှဲ ကြောငျးဝငျးအတှငျး ဆကျလကျဖွဈပျေါလာမယျ့ ကိစ်စအဝဝဟာ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအာဏာပိုငျအဖှဲ့ရဲ့ဖိနှိပျမှုတှကွေောငျ့သာဖွဈတယျလို့ ဆန်ဒပွကြောငျးသားတှကေ ပွောပါတယျ။
#VOM #voiceofmyanmar #ရနျကုနျ #အနုပညာတက်ကသိုလျ #ကြောငျးသား #ဆန်ဒပွ
အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)က ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ကျောင်းသားတွေက ဆန္ဒပြ
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)က ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဟာ ကျောင်းသားထုအပေါ် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုကာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက အဲ့ဒီကျောင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်)က ကျောင်းအတွင်း ကြွေးကြော်သံ ၃ ချက်နဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒပြခြဲှ့ကပါတယ်။ .
ကျောင်းသားထု အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေး ဒို့အရေး၊ ကျောင်းသားထုကိုဖိနှိပ်ထားသော ကျောင်းစည်းကမ်းချက်များ အလိုမရှိ အပါအဝင် အဆောင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိရေး ဒို့အရေး ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ကျောင်းဝင်းအတွင်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နယ်ကနေကျောင်းလာအပ်တဲ့ကျောင်းသားအားလုံးကို အဆောင်နေထိုင်ခွင့်ပေးပေမယ့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်)အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုတော့ အဆောင်နေထိုင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက် အခုလိုဆန္ဒပြတာဖြစ်ပြီး ရာဇသံပေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
” နယ်ကလာပြီး ကျောင်းအပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အဆောင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဗကသအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့ အဆောင်မပေးဘူး ပြောပါတယ်။ ဒါဟာဖိနှိပ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဘက်က အကြိမ်ကြိမ်ညှိုင်းခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး ။ တခြားနယ်ကလာသူ အကုန်လုံးကို နေစရာအဆောင်ပေးပါတယ် ။ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ရာဇသံပေးကြွေးကြော်ခဲ့တာပါ။ ၅ ရက်အတွင်းကိုမှ မဖြေရှင်းပေးဘူးဆိုရင် ဒီထက်ပြင်းတဲ့ တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”လို့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ပြည်လည်ဖွဲ့စည်းရေး) ဦးဆောင်သူ ကိုအောင်ပိုင်ဦးကပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကြွေးကြော်တဲ့ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်‌နေတာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုပါ တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုထားတဲ့ (၅)ရက်အတွင်း ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာကို မဖြေရှင်းပေးပါက ကျောင်းဝန်းအတွင်း ပြင်းထန်သောပုံစံတွေနဲ့ ဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်ဆက်တွဲ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကိစ္စအဝဝဟာ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေက ပြောပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #ရန်ကုန် #အနုပညာတက္ကသိုလ် #ကျောင်းသား #ဆန္ဒပြ